राेचक संसार Archives - jagritikhabar.com
खुट्टा गन्हाउँछ ? तेसो भए यसो गर्नुस !
गर्मी लागेसँगै धेरै मानिसमा खुट्टा गन्हाउने समस्या हुन्छ । जुत्ता लगाएर धेरैबेरसम्म बसिरहँदा खुट्टा गनाउने समस्या झनै बढेर जान्छ । खुट्टा गन्हाउने समस्यामा कागतीको प्रयोग निकै लाभदायक मानिन्छ । राति सुत्नुअघि खुट्टामा मोजा लगाइ त्यसभित्र कागती राखेर सुत्दा खुट्टा गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।...
अचम्मको नशा:म बिहान ओछ्यान बाट उठे, अचानक मेरो छाती दुख्न थाल्यो। मलाई मुटुको बिरामी त भएको हैन? यस्तो सोच्दै म अर्को कोठा बैठक रुममा गए। त्यहा पुरै परिवार आआफ्नो मोबाइलमा ब्यस्त थिए । मैले श्रीमतिलाई हेर्दै भने: आज छाती अरुदिन भन्दा धेरै नै दुखिरहेको...
टिप्स । आजको संस्कृति र जीवनशैली यस्तो बनेको छ कि शरीरमा कुनै न कुनै समस्या रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा ढिलो निन्द्रा लाग्नु पनि रोगको मुख्य लक्षण हो । समयमै सुत्नु भएन भने शरीरमा धेरै प्रकारका समस्या आउन सक्छ । राति निन्द्रा नलाग्नुको मुख्य कारण...
काठमाडौं । रियलमी, विश्वमा सबैभन्दा छिटो अघि बढिरहेको स्मार्टफोन ब्रान्डले आज २०२२ का दुई सबैभन्दा रोमाञ्चक स्मार्टफोनहरुको सार्वजनिक गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा छिटो चार्ज हुने स्मार्टफोन रियलमी जिटी नियो ३ सँगै सबैभन्दा प्रिमियम फ्लागशिप रियलमी जिटी २ प्रो पनि सार्वजनिक भएको हो। रियलमीले...
पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ । अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने ? अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ । त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन् । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं ।...
काठमाडौं । योग लोकप्रिय हुँदै जानुमा थुप्रै कारणहरू छन् । एउटा कुरा त यसले तपाईंलाई आफूबारे केही मूलभूत तथ्यहरूको बोध गराउँछ । तपाईंको शरीर एउटा ब्यारोमिटर (मापन गर्ने यन्त्र) जस्तै हो । यदि तपाईंले यसलाई हेर्ने तरिका जान्नुभयो भने, त्यसले तपाईंलाई आफ्नो बारेमा सबैथोक...
काठमाडौं : विवाहित महिलाहरुले आफ्नो पति हुँदाहुँदै प’रपुरुषसँग किन अ’वैध स(म्बन्ध राख्छन् त रु प्रश्न निकै ज’टिल छ । कुनै पनि प’रपुरुषसँग शा’रीरिक स(म्बन्ध राख्ने इ’जाजत हाम्रो संस्कृतिले दिँदैन ।तर पनि कतिपय महिलाहरु प’रपरुषसँग आ’कर्षित हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण व्यक्तिगत रुपमा फरक(फरक...
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX...
विवाहपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै सबैको जोड हुन्छ । वैवाहिक स-म्बन्ध यस्तो स-म्बन्ध हो कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ । आधुनिक समाजमा विवाहको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । विवाहे-त्तर स-म्बन्धले धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरुमा...
प्याजले बढाउन्छ लामो समय ‘यौ”नआनन्द’, कसरी प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौं । प्याजको सेवन धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौ न क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा...